जानकी मन्दिरमा जानकीजीलाई सवा किलो सुन
आज साँझ जानकी मन्दिरमा मिथिलाको परम्पराअनुसार विधिपूर्वक जानकी जन्ममहोत्सव तथा पूजा गरिने बताइएको छ ।
रति ८:१४ बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । विश्वप्रसिद्ध जानकी मन्दिरमा विहिबार सवा किलो सुन चढाइएको छ । जानकी नवमीको अवसर पारेर जानकीजीलाई सवा किलो सुन चढाएको हो ।
जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णवले १ किलो र निर्मला देवीले २५० ग्राम सुन जानकी मन्दिरमा चढाएका हुन् ।
कोरोनासंक्रमण रोकथामका लागि धनुषा जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गर्दै जानकी मन्दिरको मुख्यद्वार बन्द गरिएको थियो । यसवर्ष मन्दिरका पुजारी र केही धर्मानुरागीको उपस्थितीमा मात्र जानकी नवमी मनाइएको हो ।
कोरोनाको त्रास तथा नेपालको विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहेकोले आज घरघरमा दियो बाली आरती गर्न महन्थ दासले आग्रह गरे । आज साँझ जानकी मन्दिरमा मिथिलाको परम्पराअनुसार विधिपूर्वक जानकी जन्ममहोत्सव तथा पूजा गरिने बताइएको छ ।
जनकपुरधाम सहित मिथिलाञ्चलमा आज जानकी नवमी मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष जानकी नवमी माता सीताको जन्म भएको दिनको रुपमा मनाइने गरिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष हर्षोल्लासपुर्वक जानकी जन्मोत्सव मनाइएपनि पछिल्लो २ वर्ष देखि कोरोना महामारीका कारण यो पर्व प्रभावित भएको छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तिव्र रुपमा फैलिरहेको समयमा धनुषामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञाको कारण जानकी मन्दिरको मुल गेट समेत बन्द गरिएको छ । आज जानकी जन्मोत्सव भएपनि जानकी मन्दिरको मुल ढोका बन्द नै रहेको छ ।
हजारौँको संख्यामा भिड रहने गरेको जानकी मन्दिर आज सुनसान देखिएको थियो । जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णवले आज आ–आफ्नो घरमै पूजा अराधना गर्न सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।
यसपाली असोज ३ गते कालो दिवस कसले मनाउने ?
सम्पादकीय | उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सँघीय सरकारमा हुँदा पूर्व राजपा अर्थात राजेन्द्र महतो महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ताहरुले असोज ३ गते कालो दिवस मनाउँदै आएको ज्ञातव्य छ । गत वर्ष
सम्पादकीय | उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सँघीय सरकारमा हुँदा पूर्व राजपा अर्थात राजेन्द्र महतो महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ताहरुले असोज ३ गते कालो दिवस मनाउँदै आएको ज्ञातव्य छ ।
गत वर्ष समेत पूर्व राजपाका समर्थक नेता तथा कार्यकर्ताहरुले असोज ३ गते जनकपुर सहित तराई मधेशको विभिन्न ठाउँमा कालो दिवस मनाएका थिए । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले सँयुक्त रुपमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सँविधान दिवसमा भाग नलिने जनाएका थिए ।
उता, राजेन्द्र महतो समर्थित युवाहरुले भने असोज ३ गतेलाई कालो दिवसकै रुपमा मनाएका थिए । वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गत देशका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले सँविधान जारी गरे । त्यसमा केही बुँदाहरुमा त्रुटि भएको भन्दै र मधेशको हकअधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
केही बर्ष अगाडी सँविधान जारी भएपछि पनि उपेन्द्र यादव केन्द्र सरकारमा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्री हुँदा उनका समर्थकहरुले सँविधान दिवस मनाएका थिए । यहाँसम्म की प्रदेश २ को सरकारमा बाहुल्यता रहेको तत्कालिन समाजवादी पार्टीले प्रदेशमा सँविधान दिवस मनाएको थियो ।
त्यतिबेला राजेन्द्र महतो नेतृत्वको कार्यकर्ताहरुले भने जनकपुर सहित अन्य ठाउँमा कालो दिवस नै मनाउँदै आएका थिए । गत वर्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको पार्टी एकतापछि विभेदकारी सँविधानमा भाग नलिने भनेर सँविधान दिवस बहिष्कार गरेको थियो ।
वि.सं. २०७६ सालमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले सँविधान दिवस मनाएको थियो भने राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पार्टीले कालो दिवस मनाएको थियो । वि.सं. २०७५ सालमा मन्त्री पदको लोभमा परेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी भने तटस्थ बसेका थिए भने २०७६ सालमा तीन दिवसीय कार्यक्रम गरी सँविधान दिवस मनाएका थिए ।
गत वर्ष राजपा र समाजवादी पार्टीको एकता भएपछि दुवै पार्टीले सँविधानको विरोध गर्दै कालो दिवसको रुपमा मनाएका थिए । शुक्रबार उपेन्द्रलाई छाडेर राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले ओली सरकारको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएपछि सँविधान दिवस मनाउने की कालो दिवस भनेर प्रश्न उठन थालेको छ ।
यसपाली उपेन्द्र यादवले कालो दिवस र राजेन्द्र महतो महन्थ ठाकुर नेतृत्वले सँविधान दिवस मनाए यी सबै नेताहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि मात्र सोझासाझा जनतालाई निरन्तर “युज एण्ड थ्रो” गरिरहेको भनेर साबित हुनेछ ।
एक क्वाटर दारु र एक प्लेट मासुको लोभमा सडकमा टायर बाल्न निस्कने कार्यकर्ताहरु पनि यसपाली सर्मिन्दा हुने वा नहुने हेर्न बाँकी छ । यसपाली असोज ३ गतेको निर्णयले नेता र कार्यकर्ताको वजन तय हुनेछ भने सोही निर्णयले दासत्व, चाप्लुस र बिकाउको टयाग पनि लाग्ने तय छ ।
तर, प्रश्न त अब चलिरहन्छः यसपाली कसले कालो दिवस र कसले सँविधान दिवस मनाउने ?
वायूसेवा निगम सुधारको लागि ठोस कार्य योजना ल्याउनुछः मन्त्री अरगरिया
प्रदेश नं २ को नीति तथा कार्यक्रम पारित